IQumrhu leMCELO Ukuqhathaniswa kwenkomfa ye-Atlantic Coast (ACC)
Ukuba uyazibuza ukuba unemibuzo ye-ACT izikolo ozakufuna ukuba ungene kwiyunivesithi enye yeeNkcubeko zeNxweme yase - Atlantiki , nantsi uqhathaniso oluhlangeneyo lwamanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yezi ziko.
Qaphela, ewe, ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. I-ACC ye-admissions izikhululo ziya kukhangela irekodi ephakamileyo yesikolo, isicatshulwa esenziwe kakuhle kunye nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo .
INkomfa yoLwandle lwe-Atlantic Coast UMthetho Ukulinganisa (phakathi kwama-50%)
College of Boston 33 35 31 35 28 33
KwiYunivesithi yeSyrause 25 29 24 31 24 29
KwiYunivesithi yaseTrace Dame 32 35 - - - -
KwiYunivesithi yasePittsburgh 27 32 26 33 26 31
Yunivesithi yaseVirginia 29 33 29 35 29 35
Wake Forest Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
AbaMongameli baseMzantsi Melika
Uphawu lweSpanish Road
Impembelelo ye-Olmec Impucuko eMesoamerica